ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 4:57 PM6comments:
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 1:58 PM 8 comments:
နယ်က သူငယ်ချင်းဟောင်း တစ်ယောက်နဲ့ ရန်ကုန်မှာ စကားအဟောင်းတွေ ပြော...
ရုပ်ရှင်အဟောင်းတွေ ကြည့်ဖြစ်တုန်းက နေရာဟောင်းတွေဟာ
ဒီဖက်ခေတ် ရန်ကုန်ကို ထားသွားတာ ကြာပြီ လို့ သူက ထင်ထားတာ ဆိုပဲ..
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ကြွေပြား အသစ်တွေ၊ အင်းယားမှာ ခုံတန်းလျား အသစ်တွေ
စူပါမားကတ် ထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေ၊ ဘိုအစားအစာ အဆန်းတွေ
မီးပွင့်မတတ် ဖက်ရှင်တွေနဲ့ လူ အဆန်းတွေ၊ မဟားဒယားကြီး လုပ်ယူထားတဲ့
ယိုယွင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ် အခွံကြီးထဲမှာ တိုးကြိတ် တွယ်ကပ် ခရီးသွားနေတဲ့ လူနေမှုစနစ်တွေကို
ပိုက်ဆံ ၂၀၀ စီ လိုက်ကောက်နေတဲ့ စပယ်ယာ တွေ ကို သူတွေ့တယ် တဲ့...
နောက်တော့.. အဲဒီသူငယ်ချင်းဟောင်းက ဘတ်စကားအဟောင်းကို စီးပြီး
ပလပ်ဖောင်းအဟောင်းမှာ လျှောက်ပြီး လမ်းဟောင်းဟောင်းထဲက ကျွန်တော့်ကိုလာတွေ့တယ်..
လွယ်အိတ် အဟောင်းထဲကနေ ထပ်ထုတ်ပေးရတယ် ဆိုပြီး ငြီးတယ်..
ပြီးတော့ ယဉ်ကျေးမှု အဟောင်းတွေ အကြောင်းနဲ့ သူတို့ Revolution အကြောင်း
သိမ်ကြီးဈေးဟောင်းဟောင်း၊ လသာလမ်း ဟောင်းဟောင်း၊ ၁၉ လမ်း ဟောင်းဟောင်း
ဆူးလေ ဟောင်းဟောင်း ဟာ ၉၀ ခုနှစ် များဆီက စာအုပ်တွေထဲက နေ ခု ရောက်နေတဲ့ အချိန်ဆီကို ခုန်ဆင်းလာ
ဂျပ်ဆင်ဟောင်းဟောင်း၊ ကွန်ဗိုကေးရှင်း ဟောင်းဟောင်း၊ သစ်ပုတ်ပင် ဟောင်းဟောင်းတွေဟာ..
မိတ်ကပ်လိမ်းထားတဲ့ အဓိပတိလမ်းပေါ်ကနေ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် နှောင်းပိုင်းဆီကို ကျွံကျနေတယ်..
စသဖြင့် သူငယ်ချင်းဟောင်းလေး ရန်ကုန်အဟောင်းကို မြင်စ ပြုလာတယ်
ဒိုင်ယာနာကေ ထမီ ခြေသလုံးအထက်နားထိ မြှင့်ဝတ်ထား၊
လက်ဖောင်းအင်္ကျီများ၊ မွှေးပွလွယ်အိတ် ပုခုံးတစ်ဖက်ချ လွယ်ထား
ရှပ်အင်္ကျီကို ဂျင်းဘောင်းဘီကျပ်ကျပ်ထဲထည့်ဝတ်၊ ခပ်အုပ်အုပ်ဆံပင်ကို အလယ်ခွဲ၊ မျက်မှန်မည်းမည်းနဲ့
ရုပ်ရှင်၊ ဓါတ်ပုံ၊ မှတ်တမ်းဟောင်းထဲက အမျိုးသမီးဟောင်းဟောင်း၊ အမျိုးသားဟောင်းတွေကိုလဲ
မြင်လာတယ်.. သူမြင်ယောင်ပြတော့ ကျွန်တော်လဲ မြင်တယ်.. ကျွန်တော် နားထောင်တာကို သူ ကြားတယ်..
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းဟောင်းက ကျွန်တော့်ကို ဟောင်းဟောင်းကြီးကြည့်ပြီး ဟောင်းဟောင်းကြီး ပြောတယ်..
သူ ဖတ်ဖူးတဲ့ ရန်ကုန်အကြောင်းတွေဟာ အရောင်တလက်လက်နဲ့ ဟောင်းနေတယ်..
ဒီဖက်ခေတ် ရန်ကုန်မှာ သူ ရုပ်ရှင်ဟောင်းဟောင်းတွေ ရှာကြည့်တယ်၊ သီချင်းဟောင်းဟောင်းတွေ ရှာ နားထောင်တယ်..
ဈေးဟောင်းဟောင်းဆီ ရှာသွားပြီး အစားဟောင်းဟောင်းတွေ ရှာစားတယ်..
သမိုင်းဟောင်းဟောင်းတွေ ရှာဖတ်ပြီး မှတ်တမ်း ဟောင်းဟောင်း တွေ ဆီ ရောက်အောင် ရှာသွားတယ်..
သူဟောင်းနွမ်းမှု ဟာ အရောင်တွေ လက်လို့၊ သူ့ ဝင်စားစိတ်ဟာ သစ်လွင်နေလို့...
ဘယ်အဟောင်းတွေကမှ ရန်ကုန်ကို မတော်လှန်ကြ၊ သူ့ရဲ့ ဘယ်သမိုင်းကမှ ရန်ကုန်ကို မကိုင်လှုပ်ကြ
အားလုံးဟာ သတိ အနေအထားအတိုင်း ဟောင်းနွမ်း ဆွေးမြေ့သွား..
အဟောင်းများသို့... ဟောင်းဟောင်းကြီး လျှောက်လာရင်း
ညနေစောင်းစောင်းမှာ အင်းစိန်လမ်း ဟောင်းဟောင်းပေါ်မှာ
ဘာလိုလို နဲ့ ဒီနေ့ကျွန်တော် အဟောင်းတွေ ပွေ့ပြီး ဘတ်စကားပေါ် တက်ခဲ့တယ်..
အဲ့ဒီ အဟောင်းတွေ ထွက်ကျကုန်တာတောင်..
ဘတ်စကား အဟောင်းကြီးက ချောင်.... ချိ... လို့....။ ။
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 1:57 PM2comments:
ဆပ်ပြာပူဖောင်းများ/ အချစ်များ/ လမ်းများ
အချစ်ဆိုတာ ဝင်ရိုးစွန်း တစ်ဖက်ခြမ်းက နှင်းကို
ကိုယ့်ဖက်ခြမ်းကနေ အပြစ်ကင်းကင်းနဲ့ အေးမြဖြူစင်ပေးခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်
ဆောင်းရာသီ တစ်ခြမ်းပဲ့ကို သဇင်တွေ ပွင့်ပေးခဲ့
ရယ်ပဲ ရယ်မနေပါနဲ့ကွယ် . .
ပင်လယ်လို သံသရာကျယ်ကျယ်ထဲ ကိုမှ ကြွေကျချင်တဲ့ ကြယ်လေ . . .
လူနေမှုစနစ်ကို ကောင်းကင်ဆီ လွှတ်တင်မိပေါ့
လိုက်ခဲ့ပါတော့ . . . လို့ တိုးတိုးခေါ်
ကိုယ်ပျော်ပါတယ် . .။
မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ဓားတစ်စင်း မဟုတ်ဘူး
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ရူးသွပ်မှုပါ . . လို့
ဇီဇဝါတွေ ဖတ်ဖို့ ကဗျာလည်း ရေးမယ်
မိုးခါးသောက်တဲ့ ညတိုင်းရဲ့ သန်းခေါင်တွေကို ရေတွက်ပါ..
တစ် ဘဝစာ ညဉ့်နက်မှုတွေ အဖြစ် မှတ်သားထားလိုက်ပါကွယ်.. လို့...
စံပါယ်တွေ ဆိုဖို့ သီချင်းလဲ တီးခတ်မယ်..
မင်း... မရယ်ပါနဲ့ ကွယ်..။
မင်းနဲ့ကိုယ် ဖမ်းမမိလိုက်တဲ့ ဆပ်ပြာပူဖောင်းလေးတွေက
မင်းရဲ့ အိပ်မက်တွေထဲမှာ ဖောက်ကနဲ ဖောက်ကနဲ ပေါက်ကုန်တယ်
ကိုယ့် ကမ္ဘာထဲမှာ ကိုယ် တခုတ်တရ မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့
ကြီးငယ် ရွယ်လတ် ဆပ်ပြာပူဖောင်းတွေ... ပူဖောင်းတွေ..
ကမ္ဘာမြေပြင်ဟာ... ကိုယ့် နှုတ်ခမ်းဖျားက နေ လွင့်ပျံတက်သွားတဲ့
အကြီးဆုံး ဆပ်ပြာပူဖောင်းကလေးပါ လို့...
ကိုယ်.. တစ်ချိန်ကျ ပြောပြဦးမယ်..
အဲ့ဒီအခါကျရင်တော့ ရယ်ချင် ရယ်ပါ။
ကိုယ် ကောက်ရထားတဲ့ ပျက်လုံးတစ်ပုဒ် ရှိသေးတယ်
သူက အနွေးထည် ဆန်ဆန် လူရွှင်တော် တစ်ယောက်ပါ..
မင်း ချမ်းတဲ့ ဆောင်းကို ရောက်ရင် ကိုယ့်ဆီက တောင်းပါ..
နှင်းတွေ မစင်အောင် ဝတ်ဆင်ထားနိုင် နေတာတောင်..
ရယ်စရာ တော့ ကောင်းနေသေးတာပေါ့လေ..
ခု မှတော့ ...
ရယ် ချ လိုက် ပါ တော့..။ ။
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 8:47 PM No comments: